Ọfịs Dabere na isiokwu nke imeghe na nchọpụta ihe omimi, nyochara imewe ma mepụta ntinye uche nke ike ike na akụkọ ụwa na njiri mara ihe. Atumatu a doziri nsogbu atọ ndị a site na iji ihe ngosi ọhụụ: Nhazi nke oghere oghere na ọrụ; Nkewa na ngwakọta nke oghere oghere; Regulargbanwe oge na ụdị okike udiri anya.
Ihe Ngosi Art na-emetụta ndụ na ndụ na-eweta ntụgharị uche dị ukwuu na nkọwa nka. Oghere dị n'etiti nka na ndụ nwere ike ịbụ na njem ị na-eme kwa ụbọchị. Ọ bụrụ na ị na-eri nri ọ bụla nke ọma, ị nwere ike gbanwee ndụ gị ka ọ bụrụ nka. Ihe okike puru iche bu ihe osise, bu ndi n’echiche ya. Usoro dị iche iche bụ ihe eji arụ ọrụ, ihe na-egosi ya bụ nsonaazụ. Naanị na echiche ga-enwe ezigbo ọrụ.
Etiti Oge Mgbe Ochie Na-Atụgharị Uche Ebe Ebe Ebe Ọfịs Ihe Ngosi